I-9 IT Iikhosi Abafundi mabayenze Emva kokudlula i-12th Exam Exam - ITS
I-9 IT Iikhosi Abafundi kufuneka bayenze Emva kokudlula i-2017 12th Iimviwo zeBhodi
IT Izifundo kunye neZatifikethi emva kwe-12th Exams
1. Intshayelelo yeJava
4. Okusemqoka Kwamafu
5. Eyona nyaniso
6. UmSebenzi +
7. Khu seleko +
Iziphumo zeCandelo le-CBSE ze-XII ziphume, abafundi abaninzi baya kuvuswa ukuvuma ukuba lixesha elide lokukhetha ikhosi. Iikhosi ze-IT zinika ithuba elihle njengoko zifunwa kakhulu kwaye ziyakwenza abantu bafuneke ngamandla kwi-digital upheaval eqhubekayo. Nazi ezinye zezifundo ezibalulekileyo ze-12th abafundi abaqhelekileyo abanokugqiba.
Igama loqeqesho: I-SCJA OCP Java SE 7 yoQeqesho loQeqesho noQeqesho lweNgcaciso
Le khosi inikeza ukufunda nokuphuhliswa kwesicelo kubafundi. Le nqanaba elimangalisayo lokwenza isiseko kwiprogram yeJava kwaye uyazi iikhontrakthi ezinjenge-encapsulation, ukuchithwa kunye nelifa.
Izinzuzo - Ngethuba lokuqhubela phambili kwiJava, unokuba ngumprogram weJava. Ukongezelela koko, kamva unokuzaliswa njengeprojekti okanye inkqubo yabaqondisi ngokusebenza apho ulwazi oluphezulu ukuya ngasezantsi lweJava luyakunceda ukuba wenze amalungiselelo amalungiselelo ngenkqubela iinkqubo.
Igama loqeqesho: 10266A: C # UkuQeqesha okuPhambili
Le syllabus yekhosi iquka isakhiwo seC # program, ukuphunyezwa, kunye ne-syntax yolwimi. Abafundi beeprogram ezisezantsi baya kuthatha ukufunda nokufaneleka ukuze benze izicelo ze-C #. Le khosi iqukumbela izihloko ezifana neNET Framework, usebenzisa i-studio ebonakalayo kunye neC # ukudala izicelo ze-.NET Framework.
Izinzuzo - Ukusekwa ku-C # kuza kukulungiselela ukuba ube ngabakhompyutheni benkqubo kunye neeprosoft.
Igama loqeqesho: CompTIA Linux +
I-Linux + khosi ikukhuthaza ukuba uphumelele izitifiketi ezintathu - i-CompTIA Linux +, i-LPIC-1 kunye ne-Novell Certified Certified Administrator. Izihloko ezifakwe kwikhosi ziya kukuxhobisa ukuqonda iingcamango zeMveliso ye-Linux, iDebbian, kunye noBuntu.
Izinzuzo - Emva kokuba uzalise le khosi uza kuba nekhono lokulawula i-hardware, ulungiselele ukufikelela okude, iimpawu zeechanize, ukuvelisa iinkcukacha zobume kwaye wenze neminye imisebenzi ehambelana nokufunda kwe-Linux. Uya kuba ngumntu oxhelelwe ngokuxhomekeka ngesimo esingaqhelekanga sokuthatha udumo kule nqanaba elinzima kwishishini lesofthiwe.
Igama loqeqesho: CompTIA Cloud Essentials
Abafundi abaneziphumo zeCandelo lesibini elingaphandle bangenza le khosi eziza kubakhokelela ngeengcamango ze-computing yefu.
Izinzuzo - Njengoko abafundi bathabatha umgangatho ophezulu ukuya kwisiseko esezantsi kwezicwangciso zokulawulwa kwefu. Baya kuqokelela ulwazi oluthe ngqo kwiinkalo zeenkonzo zefu kwiinkalo zobugcisa kunye nezoshishino, okwangoku kuyimfuneko yokuba iindawo ezihloniphekileyo kwi-IT kunye ne-IT engekho.
Ikhosi ngegamae: Ubunyaniso bobuNyunithi kunye neYinity Engine, i-Google Cardboard kunye ne-Oculus Rift
Ikhosi inikezela ngezandla kwi-injini ye-Unity3D ukwenza imeko ebonakalayo ye-Oculus Rift kunye ne-Google Cardboard.
Benefits – Uya kwakha isiseko esomeleleyo malunga nobugcisa beqiniso kunye nezicelo zayo zanamhlanje. Uninzi olufanelekileyo kubaqulunqi bemidlalo yeminqweno, le khosi yindlela yokuma phakathi kwabaninzi abafuna iikhosi ngabafundi.
Igama loqeqesho: I-CompTia Server +
Le khosi ihlanganisa izihloko ezifana neprogram, i-hardware, ukugcinwa, ukubuyiswa kweentlekele, iindlela ezifanelekileyo kwiimeko ze-IT kunye nokujongana neengxaki. Kule khosi, unokuphanda inkqubo yokugcinwa kweseva kunye neengcinga zokubuyisela inhlekelele.
Izinzuzo - Ukongeza kwinjongo yale khosi yindlela yokuthengisa engenakulungelelaniswa kwaye ifumana iziphumo malunga neeseva zewebhu kunye nobuchwepheshe bewebhu. Ukuqhubela phambili, unokuba ngu-IT onobuchule obukhulu ekufakekeni, ekugcineni nasekujongeni iingxaki zokunxibelelanisa kwintsimi.
Igama loqeqesho: CompTIA Ukhuseleko + Uqeqesho loQeqesho
Le khosi ye-IT / yekhompyutha emva kwelanga leshumi elinesibini ikunika ithuba lokusebenzisa ukufundwa kokukhuselwa kwedatha kwiintanethi zangempela. Uya kwakha i-acum eqinileyo kwiingcinga zezokuphepha ze-IT njengolawulo lwesazisi, ukunciphisa ingozi kunye nokulawulwa kweengozi, i-cryptography, iziseko zokhuseleko, ukulawula ukufikelela kwenethiwekhi kunye nabanye abaninzi.
Izinzuzo - Fumana uguqulelwe ukuba ube ngugqirha lwezokhuseleko, abacebisi bezokhuseleko okanye oonogada bezokhuseleko. Njengoko ulwaphulo-mthetho lwe-cyber luya kwanda, i-career e-cyber ukhuseleko unokukhethwa ngokukhethekileyo.
Igama loqeqesho: CompTIA N +
Le khosi inikeza uqeqesho olusemgangathweni lwamanqanaba ekufakeni, ukuqwalasela, ukugcina, ukujongana nokujongana neengxaki zophuhliso lwenethiwekhi.
Izinzuzo - Uza kunciphisa amandla okuhlukanisa iimpawu zenkqubo zethungelwano, izicwangciso ze-LAN kunye nokuphunyezwa kwe-WAN, imiba yokhuseleko lwenethiwekhi njl. Akukho nkampani namhlanje ingasebenza ngaphandle komveleli wenethiwekhi, yongezelela ekuthandeni kweli khosi kunye nokuzinza kobuchule emva koko. .
Igama loqeqesho: Eyona Mixed (AR kunye neVR) Ngobunye 3D kunye ne-Microsoft HoloLens
Ukwenza le khosi kukunika ithuba lokudibanisa ukungenelela kweNyaniso kunye neNyaniso eyiNtloko ngeHoloLens uze ufumane ingcamango yokusebenza ngokubalulekileyo kwehlabathi elibonakalayo. Ikwazisa kwisigaba seHoloLens kunye neendlela ezingcono zokusebenzisana neekhomputha.
Izinzuzo - Njengoko ufunda kwaye uqhube ulawulo lwenkqubela kunye nebalazwe yendawo, vula injabulo yakho yokwazi nokunyamekela ukunyaniseka kwenyaniso kunye nokwenyuka kwenene kwaye uyiguqule ibe yimisebenzi ephumelelayo.
Xa kuvalwa, makube njengoko usenakho ukuphumelela iimviwo zakho zeebhodi ezilishumi elinesibini, unokuhlala uvuya xa uqaphela ukuba akukho ukusilela kokhetho emva kweyeshumi elinesibini iimviwo. Ngenxa yeminqweno kunye neenjongo, abafundi banokukhetha nayiphi na iikhosi ezibhalwe apha ngasentla ukwakha isiseko esipheleleyo solwazi kunye ne-acumen kunye nokuqinisekisa ukuba yimisebenzi ephumelelayo kamva.